Arsenal Iyo Milan Oo Isku Heysta Saxiixa Ryan Bertrand – Garsoore Sports
Arsenal Iyo Milan…
Kooxaha Arsenal, Ac Milan iyo Monaco ayaa isku heysta saxiixa dambeedka-biddix ee kooxda Southampton ee Ryan Bertand kaddib markii wadahadallo heshiis kordhin ah oo xiddigan iyo kooxdiisa dhexmarayay ay burbureen.
Iyadoo qandaraaska xiddigan uu dhacayo xagaaga, kooxaha Premier League iyo labo ka mid ah kooxaha waa weyn ee Yurub ayaa bilaabay inay saxiixiisa uga faa’iideeystaan wadahadalada qandaraaska xiddigan iyo kooxdiisa oo burburay aawadeed. Man City sidoo kale la sheegayaa inay xiriir la sameeysay kooxda Southampton si ay wax uga weeydiiso helitaanka xiddigan.
Kooxda Southampton ayaa iska diiday dalab uga yimid kooxda Arsenal bishii Janaayo markii uu furnaa suuqa kala iibsiga iyadoo markaas la rajeynayay in heshiis cusub ay kooxdiisa ka saxeexdaan xiddigan, laakiin tababare Ralph Hasenhuttl ayaa qirtay in labada dhinac aysan wax heshiis ah gaarin.
Haddi ay Arsenal lasoo saxiixdaan xiddigan wuxuu beddel u noqon doonaa Kieran Tierney, oo si weyn looga qadariyo Emirates. Si kastaba ha noqotee, rikoorka dhaawaca ee xiddigan reer Scotland ayaa keeni kara in Bertrand la siiyo waqti badan oo uu u cayaaro Gunners.
Toddobaadyadii la soo dhaafay, tababare Mikel Arteta ayaa lagu qasbay inuu Granit Xhaka u adeegsado daafaca-biddix oo ka fog booskiisa caadiga ah ee khadka dhexe. Gunners ayaa xiriir fiican oo suuqa ah la leh kooxda Saints Iyagoo Cedric Soares kala soo wareegay isla Southampton bishii Janaayo 2020 heshiis qiimo jaban markii qandaraaskiisu dhacayay.
Gunners ayaa si kastaba ha ahaatee waxay tartan adag kala kulmeysaa kooxda Ac Milan kuwaasoo ku wanaagsan inay ciyaartoy kala soo wareegto suuqa Ingariiska kaddib markii ay amaah kusoo qaateen Fikayo Tomori iyo Diogo Dalot oo ka kala yimid Chelsea iyo Manchester United, xilli ciyaareedkan.
Dhanka kale, kooxda Monaco ee dalka Faransiiska ayaa xiiseeyneysa xiddigan waxaana hoggaaminaya agaasimahooda isboortiga ee Paul Mitchell, oo ah nin si fiican galaangal ugu leh suuqa Ingiriiska, kaasoo ay ka keensadeen kooxda Jarmalka ee RB Leipzig.
Barca Oo Heshay Saxeexoodii Ugu Horreeyay Xagaaga